Ogaden News Agency (ONA) – Daawo Muuqaalki Banaanbaxa Denmark iyo Zenawi oo Godku Galoba Lagu Gubayoo
Daawo Muuqaalki Banaanbaxa Denmark iyo Zenawi oo Godku Galoba Lagu Gubayoo
Caasimada Denmark waxa lagu qabtay banaanbax balaadhan oo aad u xoog badan oo ay kasoo qeybgaleen boqolaal qof oo cadheysan oo ka cadhooday safarka kaligi taliye Zenawi uu ku yimid wadanka Denmark.. Males Zenawi ayaa waxa uu kasoo cararay wadanka Norwey kadib markii shacab aad u badan oo ree Ogadeniya ahi ay ku hor mudaharaden shirki iyo hotelki u dagana. Zenawi oo fakad ah oo kasoo cararay su’alaha faraha badan ee laga weydiyay Ogadneiya iyo wariyasha Sweden ee ku xidhan Ethiopia ayaa taageero usoo doontay wadanka Denmark.
Haddaba shacab badan oo ka tirsan jaaliyada Denmark oo marki hore ku maqna wadanka Norwey ayaa markey ogaden innuu udaba marayo Denmark ayaa olole galay ay ku ceydhsanayaan Zenawi waxana loo soo kala baratamay wadanjka Denmark.
Jaaliyada Ogadeniya ee Denmark markii ay soo gaadhen Caasimada Denmark waxay markiiba aaden Xilli hore Policeka Sare ee Denmark waxayna ka codsaden in lasiiyo oggolaansho ay ku banaanbaxan kuna muujiyaan siday uga xunyihin kaligi taliye Zenawi innuu wadanka Denmark yimado isaga oo so xamili wayay wadanka Norwey. Hadaan nahay Shacabka Denmark waa inaan ka saarno ninkan danbilaha ah.
Hadaba Kobtan ka daawo Zenawi oo godku so galoba lagu holciyay.
Hanbalyo hanbalyo jaliyada somalida ogadeniya ee yurub sidageesinimada ah ay dhiikyacabka ugu mudaharaadeen